Ku saabsan Fipoh
Macluumaad kale oo luquado fara badan ah
WAA LAGU SALAAMAY SOONA DHAWAW
Boggan waxaad ka daawan kartaa filmaan gaagaaban haddii aad dooneysid in aad wax dheeraad ah ka ogaatid caafimaad darrada xagga maskaxda. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad ku aaddan sida aad daryeel caafimaad u raadsaneysid.Xagga sare ee midigta waxaad ka dooran kartaa luqado kala duduwan.
Maxay ka dhigantahay PTSD ?
KU SAABSAN FIPOH?
Bogga www.fipoh.se waxaad ka daawan kartaa filin ku aaddan caafimaad darrada xagga maskaxda.
Waxaad sidoo kale heli kartaan macluumaad ku aaddan halka aad daryeel caafimaad ka raadsan kartid.
Fipoh waa mashruuc uu howshiisa wadyo ururka Glokala ee wacyi gelinta bulshada ee Malmö, ee iskaashiga la sameynaya laacibiinta xagga caafimaadka ee Region Skåne, sida TKT iyo xarunta aqoonta ee Socdaalka & Caafimaadka (Kunskapscentrum för Migration & Hälsa).
Fipoh waxaa la aasaasay 2016 iyadoo taageero laga helayo Sanduuqa Guud ee Dhaxasha.
Halkan waxaad ka daawan kartaa filmaan kala duduwan oo leh warbixin ku aaddan caafimaad darrada xagga maskaxda ah.
Filmaantaas kala duduwan waxay ku saabsanyihiin qeybo kala duduwan, tusaale ahaan walbahaar, welwel, cadaadis, dhibaatooyin xagga hurdada ah ama PTSD.
Haddii aad dooneysid in aad filmaanta luqado kale ku daawatid, luqadda ka beddel liiskan kore ee bogga intarneetka.
Waxaad xitaa dhammaan filimmada ka heli kartaa boggeenna youtube-ka!
Sidoo kale fiiri:
Buug Ku Saabsan Shoog Culus
Sidoo kale fiiri: Buug Ku Saabsan Shoog Culus
Filim ku saabsan Trauma horumarsan (shoogga culus)
Miyaad aragtay wax aad u dareentay inay yihiin wax xun oo cabsi leh?
Maxay ka dhigantahay PTSD?
Maxay in la seexdo aad ugu adagtahay?
Kooxda Fipoh waa koox leh dhallinyaro qaan qaar ah oo leh khibrado kala duduwan.
Qaar annaga naga mid ah waxaannu leennahay khibrado xagga caafimaad darrada maskaxda ah.
Qaar annaga naga mid ah waxaannu leennahay khibrado ah in aannu naftirkeennu nimiday Swiidhan.
Qaar annaga naga mid ah waxaannu ku kornay Swiidhan.
Waxaannu si wadajir ah uga shaqeyneynaa qeybo go’an oo ka mid ah Fipoh.
Tusaale ahaan waxaannu caafimaad darrada xagga maskaxda ka duubnay cutub bodkaasti ah.
Halkan ka dhegeyso cutubka:
Aad baannu u soo dhaweyneynaa in aad Fipoh wax noogu soo qortid! Aadbaannu u qiimeyneynaa in aannu maqalno aragtiyahaaga ku aaddan bogga iyo filmaanta.
Annaga ka shaqeyna Fipoh ma nihin dabcan inte shaqaale caafimaad oo waxbarasho leh. Sidaas darteed kama jawaabi karno su’aalo ku saabsan caafimaadkaaga. Haddii aad su’aalo nuucaas ah qabtid waxaannu sidaas darteed kugula talineynaa in aad raacdid isku xirayaashan: www.1177.se
Materialet på denna är licenserat med (CC BY-NC-ND) Creative Commons Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar. Detta innebär att vi tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna oss som upphovsman.